Caddaynta Tallaalka Hadda Waa Ku -Meel Gaarka ah ee San Francisco
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Caddaynta Tallaalka Hadda Waa Ku -Meel Gaarka ah ee San Francisco
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • kariska • dhaqanka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Duqa San Francisco Duqa London
San Francisco waxay ka dalban doontaa ganacsiyada waaxaha gudaha ee xiriirka sare leh in ay ka helaan caddayntooda tallaalka macaamiishooda iyo shaqaalahooda si ay u galaan gudaha xarumahaas.
Shuruudda amarka caafimaadka ee caddaynta tallaal buuxa oo loogu talagalay ilaaliyayaasha goobaha dadweynaha ee gudaha, oo ay ku jiraan baararka, makhaayadaha, naadiyada iyo jimicsiyada ayaa dhaqangalaya 20ka Ogosto.
Amarka caafimaadka waxaa loo sameeyay si looga gaashaanto faafitaanka COVID-19, gaar ahaan kuwa aan la tallaalin.
Amarka San Francisco wuxuu kaloo abuuraa caddeyn cusub oo looga baahan yahay tallaalka dhacdooyinka waaweyn ee ka dhaca goobaha gudaha.
Duqa magaalada San Francisco ayaa daaha ka rogay amar caafimaad oo cusub oo loogu talagalay in laga ilaaliyo faafitaanka sii socda ee COVID-19, gaar ahaan kuwa aan la tallaalin, iyada oo meheraddu ay furan yihiin oo gacan ka geysanaysa hubinta in dugsiyadu ay furan yihiin.
Caddaynta tallaalka hadda waa khasab ganacsiyada gudaha San Francisco
Duqa London Breed ayaa maanta ku dhawaaqday in San Francisco waxay u baahan doontaa ganacsiyada waaxaha gudaha qaarkood oo xiriir sare leh inay ka helaan caddayntooda tallaalka ka-faa'iideystayaashooda iyo shaqaalahooda si ay u galaan gudaha xarumahaas.
Intaa waxaa dheer, amarka magaalada cusub wuxuu abuurayaa caddayn cusub oo looga baahan yahay tallaalka dhacdooyinka waaweyn ee ka dhaca goobaha gudaha, taas oo looga baahan yahay ka -qaybgalayaasha da'doodu tahay 12 ama ka weyn dhacdooyinka leh 1,000 qof ama ka badan inay bixiyaan caddaynta tallaalka.
"Waxaan ognahay in magaaladeena ay ka soo kabaneyso masiibada oo ay baraareyso, waxaan u baahanahay inaan isticmaalno habka ugu wanaagsan ee aan u leenahay la-dagaallanka COVID-19 waana tallaallada," ayuu yiri Breed.
Markii hore, xeerarka gobolka iyo kuwa maxalliga ah waxay u baahnaayeen caddaynta tallaalka ama tijaabinta si ay uga qaybgalaan xafladaha waaweyn ee gudaha oo ay la socdaan 5,000 qof ama ka badan.
Shuruudda amarka caafimaadka ee cusub ee caddaynta tallaalka buuxa ee loogu talagalay ilaaliyaasha goobaha dadweynaha ee gudaha, oo ay ku jiraan baararka, makhaayadaha, naadiyada iyo jimicsiyada ayaa dhaqangalaya 20ka Ogosto.
Si loo ilaaliyo shaqooyinka iyadoo la siinayo waqti u hoggaansanaanta, caddeynta shuruudaha tallaalka ee shaqaalaha ayaa dhaqangalaya Oktoobar 13 shaqaalaha, sida lagu sheegay ogeysiiska.
Shuruudaha tallaalka ee dhacdooyinka gudaha, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud, oo ay joogaan 1,000 qof ama ka badan ayaa xaadir ah Ogosto 20.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 35
تات بنوتة دردشة بنوتة شات بنوتة للجوال شات بنوته جات بنوته الصوتي